माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द, यसरी गरिदैछ स्मार्ट लकडाउन ! – Mission Khabar
माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द, यसरी गरिदैछ स्मार्ट लकडाउन !
मिसन खबर २६ पुष २०७८, सोमबार १८:१५
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी)ले गरेको निर्णय अनुसार नै बिदा दिने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारि दिएका हुन ।
यसअघि नै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) ले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेर स्मार्ट लकडाउन अनुसार महामारि रोकथाम गर्ने योजना बनाएको छ ।
यस्ता छन प्रतिबन्धका निर्णयहरु
१५ माघसम्म विद्यालय बन्द
कोरोना संक्रमण बढेसँगै १५ माघसम्म आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय बन्द गरिएपनि विश्वविद्यालयका परिक्षाहरु सुचारु रहने बताइएको छ ।
विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि १२ देखि १७ वर्षसम्मका विद्यार्थी तथा १८ वर्षदेखि माथिका शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकलाई खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ ।
राजनीतिक कार्यक्रम नगर्न आह्वान
सीसीएमसीसीले सार्वजनिक स्थानहरुमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन तथा सभा समारोह गर्न रोक लगाएको छ । सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने प्रशासनिक, सामाजिक एवं त्यही प्रकृतिका कार्यक्रमहरु नगर्न आह्वान गरेको सरकारले नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनले अनुमति लिनुपर्ने नियम लागु गर्दैछ ।
खोप कार्ड अनिवार्य
माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरुमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । यो निर्णयअनुसार अब सार्वजनिक कार्यालय, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशालामा प्रवेश तथा आन्तरिक हवाई यात्राका लागि पनि खोपकार्ड देखाउनुपर्ने नियम लागू गरिदैछ ।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुको भीडभाड कम हुने गरी उडानको व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । नेपाल प्रवेश विन्दुमा एन्टिजेन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने र पोजेटिभ आएकाहरुलाई होटल, होल्डिङ सेन्टर लगायतका आइसोलेसन सेन्टरमा राखिनेछ । सार्वजनिक स्थानहरुमा पनि निःशुल्क एन्टिजेन टेष्ट बुथहरु राख्ने र कोरोना खोपलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने बताइएको छ ।